Akwụkwọ Doug Bewsher na Martech Zone |
Edemede site na Ọnye na -bụ Doug Bewsher?
Ọnye na -bụ Doug Bewsher?
Wednesday, June 24, 2020 Wednesday, June 24, 2020 Ọnye na -bụ Doug Bewsher?
Oria ojoo Coronavirus abiala na nsogbu ya na omumu ya site na omuma ndi mmadu, nke onwe ya, na nke ahia. Ọ na-esiri ike idobe azụmaahịa ọhụụ n'ihi ọnọdụ edoghị anya akụ na ụba ahịa ohere. Ma ugbu a na Forrester na-atụ anya na 28% ga-adaba na ire ere ahịa n'ime afọ abụọ na-esote, ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ martyr 8,000 + nwere ike (enweghị ike) na-achọ ịkọwapụta na nkwadebe. Agbanyeghị, ihe m kwenyere ga-eme ka azụmaahịa Martech na-eto